Musika weFodya Unovhurwa Asi Mitengo Iri Pasi
Tobacco Auction Floors Open 1
Misika yefodya yavhurwa muHarare mitengo yefodya iri pasi asi hurumende ichiti inotarisira kuti mitengo ichakwira nekufamba kwenguva.
Gurukota rinoona nezvekurima, VaPerence Shiri, ndivo vaparura mwaka wekutengesa fodya zviri pamutemo pamusika weTobacco Sales Floor muHarare, uye vati vafara nemutengo kunyange hazvo wange uri pasi.
VaShiri vati izvi ndizvo zvinogaroitika mwaka yese sezvo varimi vachitanga kuitengesa foya yemhando yepasi.
Bhero rekutanga ratengwa nemadhora mana eku America pakirogiramu kozotiwo bhero repasi ratengwa nemasendi makumi mapfumbabweeku America pakirogiramu rimwe chete.
VaShiri vaudza Studio7 kuti zvinofadza kuti misika yefodya yavhura kunyange hazvo paine dambudziko rechirwere cheCoronavirus.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika reTobacco Association of Zimbabwe, VaGeorge Seremwe, vaudza Studio7 kuti kunyange hazvo misika yavhurwa, havasi kufara nemitengo iripo.
VaShiri vatiwo kunyange hazvo paine dzimwe nyika dzakawanda dzinorima fodya pasi rese, Zimbabwe ine mbiri yekurima fodya yemhando yepamusoro uye inokwikwidzana neBrazil chete pasi rese.
VaShiri vati kurimwa kwefodya kuri kusimukira zvakanyanya munyika uye ishuviro yavo kuti dai vanorima zvimwe zvirimwa vadzidza kubva kuvarimi vefodya.
Vatiwo kunyange hazvo Coronavirus yakavhiringa hupfumi hwenyika dzinotenga fodya kubva kuZimbabwe dzakaita seChina, hazvisati zvave pachena kuti, izvi zvichakakanganisa kutengwa kwefodya yeZimbabwe here
VaShiri vatiwo vati hurumende inoda kuti varimi vatevedze marimirwo anoitwa kufodya pakurimwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage, nembanje dzinioshandiswa kurapa dzakaita seHemp neCannabis.
Sachigaro vebhodi remakambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya, yeTobacco Industries Marketing Board, TIMB, VaPat Devenish, vati misika yefodya ingadai yakavhurwa mwedzi wapfuura asi izvi zvakatadziswa nekuda kweCoronavirus.
Vatiwo mwaka uno zvinhu hazvisi kufambiswa semamazuva ose nekuda kwechirwere cheCovid-19 uye mwaka uno varimi havasi kubvumidzwa kupinda mumisika uye vachange vaine vanhu vanovamiririra.
Mumisika mange muine vatengi chete nevanhu vashomanana uye vanhu vese vange vari pamusika vange vakapfeka maMask, vachigeza maoko nekuita zvese zvinofanirwa kuitwa pakudzivirira Coronavirus.
VaDevenish vazivisawo kuti huwandu hwevarimi vefodya hwakadzikira gore rino nezvikamu guni nezvinomwe kubva muzana.
Vatiwo varimi vachange vachibhadharwa mari yavo nezvikamu makumi mashanu kubva muzana ari madhora ekuAmerica, uye imwe yacho iri mari yemuno.